Guurka boqortooyada Iswiidhan | Somaliska
Gabadha dhaxal sugaha ah ee boqortooyada Iswiidhan Victoria ayaa maanta la akhalgaleysa jeceelkeeda Daniel Westling ayadoo ilaa 500 milyan oo qof oo kala jooga daafaha Yurub ay daawan doonaan xaflada arooska. Xiriirka u dhexeeya labada lamaane ayaa socday mudo 8 sano ah oo dhowr caqabadood ay la soo daristay jeceelkooda. Daniel ayaa ahaa tabare xaga jirka asagoo lahaa meelaha loo yaqaan jiimka ee jirka lagu dhisto. Arooska ayaa waxaa ku bixi doonta ilaa 20 milyan oo lacagta iswiidhan ah, ayadoo ayraboorka magaalada Stockholm magaciisa maanta lagu badalay Ayraboorka Jaceylka. Boqorada Victoria ayaa dagaal dheer u gashay in ay reerkeeda ka dhaadhiciso in ay guursato nin caadi ah oo aan reer boqor ka dhalan. Victoria ayaa la kulantahay Daniel markii ay isku dayaysay in ay iska ilaaliso cayilka asagoo arintaas ku caawin jiray, boqorka dalka Iswiidhan Carl XVI Gustaf ayaan xiriirka gabadhiisa kala dhexeeya Daniel aan jeclaysan (walow asaga laftiisu uu guursaday naag aan ka dhalan reer boqor 34 sano ka hor, xaaskiisa waa jermal). Victoria waa 32 jir hada halka Daniel uu jiro 36 sano. Daniel ayaa qaatay tababar dheer oo lagu barayay shaqadiisa cusub ee ah in uu ka mid noqdo qoyska reer boqor. malaayiin ayaa lagu bixiyay in muuqaalkiisa wax laga badalo, sidoo kale waxaa la badalay ookiyaalihii uu gashan jiray iyo asagoo loo tababaray siduu ugu dhakhmi lahaa sidii reer boqor. Sidoo kale waxaa lagu qasbay in uu iibiyo goobtiisii ganacsi ee jir dhiska. Waxaa ayadana dood dhalisay kharashka ku baxaya guurka, iyadoo sidoo kale dood wayn ay dhalisay markii gabadha Victoria ay dalbatay in aabaheed uu bixiyo oo sida caadada wadamada khaar ka ah uu aabuhu uu gabadha soo marsiiyo kaniisada dhexdeeda uuna gacanta u galiyo ninka guursanaya, balse caadadaan ayaan ka jirin Iswiidhan oo wiilka iyo gabadha is guursanaya ay ayagoo gacmaha is haysta soo dhex maraan kaniisada.
Gabadha dhaxal sugaha ah ee boqortooyada Iswiidhan Victoria ayaa maanta la akhalgaleysa jeceelkeeda Daniel Westling ayadoo ilaa 500 milyan oo qof oo kala jooga daafaha Yurub ay daawan doonaan xaflada arooska.
Xiriirka u dhexeeya labada lamaane ayaa socday mudo 8 sano ah oo dhowr caqabadood ay la soo daristay jeceelkooda. Daniel ayaa ahaa tabare xaga jirka asagoo lahaa meelaha loo yaqaan jiimka ee jirka lagu dhisto.
Arooska ayaa waxaa ku bixi doonta ilaa 20 milyan oo lacagta iswiidhan ah, ayadoo ayraboorka magaalada Stockholm magaciisa maanta lagu badalay Ayraboorka Jaceylka.
Boqorada Victoria ayaa dagaal dheer u gashay in ay reerkeeda ka dhaadhiciso in ay guursato nin caadi ah oo aan reer boqor ka dhalan.
Victoria ayaa la kulantahay Daniel markii ay isku dayaysay in ay iska ilaaliso cayilka asagoo arintaas ku caawin jiray, boqorka dalka Iswiidhan Carl XVI Gustaf ayaan xiriirka gabadhiisa kala dhexeeya Daniel aan jeclaysan (walow asaga laftiisu uu guursaday naag aan ka dhalan reer boqor 34 sano ka hor, xaaskiisa waa jermal). Victoria waa 32 jir hada halka Daniel uu jiro 36 sano.
Daniel ayaa qaatay tababar dheer oo lagu barayay shaqadiisa cusub ee ah in uu ka mid noqdo qoyska reer boqor. malaayiin ayaa lagu bixiyay in muuqaalkiisa wax laga badalo, sidoo kale waxaa la badalay ookiyaalihii uu gashan jiray iyo asagoo loo tababaray siduu ugu dhakhmi lahaa sidii reer boqor.
Sidoo kale waxaa lagu qasbay in uu iibiyo goobtiisii ganacsi ee jir dhiska.
Waxaa ayadana dood dhalisay kharashka ku baxaya guurka, iyadoo sidoo kale dood wayn ay dhalisay markii gabadha Victoria ay dalbatay in aabaheed uu bixiyo oo sida caadada wadamada khaar ka ah uu aabuhu uu gabadha soo marsiiyo kaniisada dhexdeeda uuna gacanta u galiyo ninka guursanaya, balse caadadaan ayaan ka jirin Iswiidhan oo wiilka iyo gabadha is guursanaya ay ayagoo gacmaha is haysta soo dhex maraan kaniisada.
Dhalinyaro Soomaali ah oo Jihaad u aaday Syria